Wasaaradda amniga oo ka warbixisay rag maanta lagu toogtay Muqdisho | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Wasaaradda amniga oo ka warbixisay rag maanta lagu toogtay Muqdisho
Wasaaradda amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay faah faahin ka bixisay laba dhalinyaro ah oo maanta ciidanka ammaanka ay ku toogteen Suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho.
Afhayeenka Wasaaradda amniga Soomaaliya C/casiis Cali Ibraahim (Xildhibaan) ayaa waxa uu sheegay labada dhalinyaro ee maanta lagu dilay Suuqa Bakaaraha in ujeedkooda uu ahaa in ay dhibaato geystaan.
Wuxuu sheegay ciidanka ammaanka in ay ka war heleen xogta raggan kadibna gacanta lagu dhigay, iyada oo loo kaxeeyay xarumaha baarista, balse inta aanan la gaarin xarumaha baarista ay raggan isku dayeen in ay baxsadaan, sidaasina ay ciidanka ku toogaan.
“Waxaan rabaa inaan idin xaqiijiyo dilalkii maanta loogu geystay Suuqa Bakaaraha ragga hubeysnaa, waxay doonayeen in ay dhibaato geystaan, ciidankeena ayaa gacanta ku dhigay raggan balse waxay la soo baxeen Bastoolado inta aan la gaarin xarunta baarista sidaas ayaana lagu toogtay.” Ayuu yiri C/casiis (Xildhibaan).
C/casiis Cali Ibraahim (Xildhibaan) Afhayeenka Wasaaradda amniga Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay in ciidanka ammaanka gaar ahaan kuwa loogu tala galay in ay ammaanka bisha Ramadaan ay shaqadooda u gudanayaan sida saxda ah.
Kooxo hubeysan ayaa maalmihii la soo dhaafay waxay dilal ka geysanayeen magaalada Muqdisho, shalay oo ugu dambeysay kooxda Daacish ayaa suuqa Bakaaraha waxay ku dileen askari ka tirsanaa ciidanka ilaalada wadooyinka, waxaana laga duubay muuqaal kooban.